DAAWO: Xisbiyadda Mucaaridka Somaliland Oo Taageray Maayirka Cusub Ee Loo Doortay Balli-Gubadle – somalilandtoday.com
DAAWO: Xisbiyadda Mucaaridka Somaliland Oo Taageray Maayirka Cusub Ee Loo Doortay Balli-Gubadle
(SLT-Hargaysa)Xisbiyadda Mucaaradka somaliland ee ucid iyo waddani ayaa xukuumadda u soo jeediyay in ay faraha kala baxdo golaha deegaanka ee gobolka hawd oo doonaya in ay doortaan maayar cusub waxaana ay xukuumadda ku edeyeen in ay ciidamo xad-dhaaf ah dul dhigtay gobolka.
Xoghayaha Warfaafinta ee xisbiga ucid yuusuf kayse cabdilaahi iyo Guddoomiyaha Anshaxa ee xisbiga waddani ayaa sheegay in qaabka ay golaha deegaanka ee gobolka hawd u doorteen maayarka cusub ay waafaqsan tahay sharciga is-maamulka gobolada iyo degmooyinka.
Ugu Horayn xoghayaha warfaafinta xisbiga ucid ayaa sheegay in xukuumadu looga baahan yahay ciidamada xad-dhaafka ah ee ay dul-dhigtay gobolka hawd
in looga baahan yahay in ay gayso gobolka sool oo xaalado coladeed ka taagan yihiin.
“nimankaasi qodobadii sharciga ahaa ayay mareen ninkii ugu waynaa sida xeerkoodu qorayo ayaa fadhigooda guddoominayay markii badhasaabka iyo maayarkuba diideen sidaas ayayna ku doorteen waxaanan leenahay gobolka hawd uma baahna ciidamo badan oo la geeyo meelo kale oo u baahan ayaa jira hala geeyo ciidamada gobolka sool ee dadkeenu isku dhimanayaan halkaas ayaan u baahan in ay ciidamo kala dhex-dhigno lakiin gobolka hawd uma baahna in ay ciidamo gayno,waxaana leenahay xukuumadu sharciga ha ilaaliso oo iyadda sharcigu ha ka bilaabmo.sidaas ayaa uu yidhi iyaga oo la hadlay horn cable tv
Intaas waxa uu ku daray xogahaya warfaafinta ee xisbiga ucid isaga oo hadalkiisa siiwata.”maaha Maayarka ay xukuumadu doonayso in ay iyadu rido oo ay iyadu u ololayso oo wasiiro loo diro,maayarka shacabku doonayaana in ay doortaana maaha xukuumadu in ay ka horistaagto oo ay waliba bilays gayso.
Dhinaca Guddoomiyaha gudida anshax ee xisbiga waddani ayaa isaguna sheegay in xukuumadu looga baahan yahay in ay taageerto aq-labiyadda xildhibaanada gobolka hawd oo Doortay maayar cusub madaama oo maayarkii hore lagu edeeyay inuu ku lug yeeshay arimo musuq-maasuq.
Shalay ayay ahayd markii ay golaha deegaanka ee gobolka hawd cod aq-labiyad leh ku doorteen maayar cusub,waxaana ay maayarkii hore ee gobolka ku edeyeen inuu ku fashilmay wax-qabadii la rabay inuu bulshadda u qabto.